Rosia: Tò Ny Nofinofin’ny Bilaogera Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 3:20 GMT
Mpampiasa ny LJ, bogomolov (Aleksandr Bogomolov, Rosiana iray mpanao gazety) no mizara ity tantara mahakasika ny nofinofy iray lasa tena izy ity (Ros):
Vazivazy tranainy iray, tena tsara, tena voasaina tsara:
Sovietika roa mpitendry lokanga no tafaraka tanaty efitra iray tao anaty fiarandalamby, teny an-dàlana hody rehefa avy any ivelany, avy niatrika fifaninanana mozika iraisampirenena. Nitàna ny laharana farany ilay voalohany, mpitendry lokanga “manao fitafin'olontsotra” [olona miafin'ny KGB ], saingy faly amin'ny ankapobeny. Ilay faharoa dia tovolahy iray tena mbola manana ny hoaviny tokoa – nahazo laharana faharoa izy io ary manasarakorako ny volony. Ho fampiononana azy, dia hoy ilay iray:
- Nahoana ianao no tezitra? Tsy ratsy manao ahoana anie izay laharana faharoa izany e…
– Hitanaooo, ilay rangahy nahazo fandresena dia navela hitendry ny lokangan'i [Niccolo Paganini] .
– Dia ahoana?
– Aleo hazavaiko aminao. Ho ahy, ny fitendrena ny lokangan'i Paganini dia toy ny hoe ianao nahatifitra [avy amin'ny Mauser an'i Felix Dzerzhinsky].
Eny, omaly aho nanana vintana hitifitra avy amin'ny Mauser iray an'i Dzerzhinsky – nilalao hockey teny ambony ranomandry aho tao amin'ny [Luzhniki] Small Sports Arena. Ilay toerana nanarahako ilay tarika ankafiziko – [HC Dynamo Moscow] – nilalaovako hatry ny mbola 5 taona aho na tahakahaka izany [hatramin'ny nanodidina ny taona 1984]. Ny sasany aminareo mety hihevitra fa tsy dia zavadehibe izany, saingy ho ahy, indrindra avy eo hoe tonga ny fotoana hanitsahana io fikorisàna io dia toy ny nofinofy iray tsy noheverina ho tanteraka velively. Saingy dia teo aho, teo amin'io fikorisàna io.
Raha ny mahazatra, manoratra ry zareo hoe hadisoam-panantenana ny nofinofy iray lasa tena izy. Tsy ho ahy izany, tena faly aho. Na resy aza isika. Saingy indray mandeha nahatafitra isa aho. Ary amin'ny ankapobeny, rakotra ireo fihetsehampo tena faran'izay miabo aho. Ary ankehitriny, alefako ho aminareo ny taratry ny hafaliana avy amiko.
Ary irariako ianareo tsirairay avy mba hahatratra, indray andro any, izay Mauser an'i Dzerzhinsky-nareo izay. Ary raha manoratra etoana ianareo hoe toy ny inona izay Mauser-nareo manokana izay, tsy ho ratsy velively.
Ao amin'ny mombamomba azy ao amin'ny LJ (Ros), bogomolov dia manoritra ny tenany ho toy ny mpankafy ny Dynamo Moscow (hockey, baolina kitra, sns…); ny “fomba fijery politikany dia tena mikorontana ary tsy tafiditra anatin'ireo ideolojia efa misy.” Tao anaty fanehoankevitra iray, hazavainy misimisy kokoa ny karazana nofinofy nataony fony izy nanoratra ny lahatsoratra:
Ny Mauser dia zavatra iray tsy niomànana / miseho eo no eo. Nitifitra ianao dia mahatsiaro faly.
20 ora izayRosia